भारतमा ट्वीटरको विकल्प बन्ला त 'कू' ?
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार
काठमाडौँ । अहिले भारतमा एउटा सानो पहेलो रंगको कुखुराको चल्ला निकै प्रख्यात भएको छ । यो वास्तविक कुखुराको चल्ला नभएर सामाजिक संजाल एप कू को लोगो हो । अहिले भारत सरकार र ट्वीटरबीच विवाद बढ्दै गएको बेला भारतमा कू लाई ट्वीटरको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ माइक्रो ब्लगिंग एप कू भारतको सरकारी संस्थाहरुले भव्य रुपमा प्रयोग गर्न शुरुवात गरेका छन् जसको कारण यसले अमेरिकी एप ट्वीटरलाई चुनौती दिएको छ । भारत सरकारले गलत समाचार फैलाइएको भन्दै ट्वीटरलाई कतिपय अकाउन्ट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसको कारण भारत सरकारले ट्वीटरलाई दोहोरो चरित्रको रहेको आरोप लगाएको छ ।
अमेरिकामा भएको संसद हिंसामा गलत सूचना फैलाएको र हिंसा भड्काएको भन्दै अकाउन्ट ब्लक गर्ने ट्वीटरले जनवरी ३६ मा दिल्लीको रेड फोर्टमा भएको हिंसामा केहि नगरेको आरोप लगाएको छ । ट्वीटरले हालै सस्पेन्ड गरेको अकाउन्टहरुलाई पुन अनुमति दिएको छ ।
सरकारले ब्लक गर्न अनुरोध गरेको अकाउन्टहरु पत्रकार, संचार संस्था र विपक्ष पार्टीकोको रहेको थियो । भारत सरकार र ट्वीटरबीचको लडाईको कारण अहिले ट्वीटरलाई क्षति भएको हो ।
भारत सारकारको समर्थकहरुले भने नयाँ एप कू प्रयोग गर्ने थालेका छन् र उनीहरुले ह्यासट्यागको प्रयोग गर्दै भारतमा ट्वीटर प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कू ले के गर्न सक्छ ?
हालै संचालनमा आएको कू प्रति भारतीय माइक्रोब्लगर आकर्षित हुनुको कारण यो अंग्रेजी सहित पाँच विभिन्न भाषामा प्रयोग गर्न मिल्छ र यसलाई १२ वटा बनाउने कम्पनीले बताएको छ । पछिल्लो वर्ष मार्चमा लन्च भएको कू लाई भारत सारकारद्वारा, आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मान पनि गरिएको थियो ।
ट्वीटर जस्तै संचालन हुने कू लन्चको केहि समयमा नै तीन मिलियन फलोअर्स आकर्षित गरको छ जसमा एक तिहाई सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
कसले लगानी गर्दैछ ?
यसै महिनाको शुरुवातमा कू को बंगलोरस्थित संस्थापक कम्पनी बोम्बीनेट टेक्नोलोजी यस प्रोजेक्टलाई फण्डिंग गर्न ४.१ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी जुटाएको थियो । कू लाई सहयोग गर्नेहरुमा सबै भन्दा अगाडी मोहनदास पाई रहेका छन् ।
उनी भारतमा निकै चर्चित छन्, उनी प्रविधि कम्पनी इन्फोसिसका सह-संस्थापक हुन् भने भारतको बिजेपी सरकारको समर्थक पनि हुन् ।
कू एप माथि चिनियाँ सहयोग रहेको बताएको भए पनि कू प्रमुख अप्रमेया राधाकृष्णले शुरुवातमा केहि चिनियाँ लागनी भएपनि अहिले नरहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा जब ट्वीटरले डोनाल्ड ट्रम्प सहित समर्थकहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो तब उनीहरु पार्लर एप प्रयोग गर्न थालेका थिए ।
के कू भारतको पार्लर एप हो ?
भारतको सत्तारुढ दल बिजेपीका समर्थकले आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई समर्थन दिने भन्दै कू प्रयोग गर्न थालेपछि मानिसहरुले यस एपलाई भारतको पार्लर एप भन्न थालेका छन् । पार्लरले आफुलाई फ्रि स्पीचको प्लेटफर्मको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ तर यस एप अमेरिकी पुर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थक बीच निकै प्रख्यात भयो ।
साथै पार्लरको मार्फत क्वानन समूह पनि सक्रिय छन् जसलाई ट्वीटरले ब्लक गरेका प्रयोगकर्ताहरु प्राय यसमा सक्रिय हुने गर्दछन् । ट्वीटरले अहिले कू एपको कारण आफ्नो प्रयोगकर्ता गुमाइरहेको छ ।
भारतका कतिपय मन्त्री तथा सरकारी कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु र ठुला कलाकारहरुले कू अकाउन्ट बनाएका छन् । उनीहरुको फलोअर्सले पनि कू एपमा फलो गरेका छन् ।
पछिल्लो महिना भारतका स्थानिय टेलिभिजन स्टेशन, रिपब्लिक टिभी च्यानलले कू संग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यस एपलाई भारतको बिजेपी पार्टीले ठुलो समर्थन गरेको छ भने कू संग सम्बन्धित ह्यास ट्याग र कन्टेन्टहरु संचार माध्यम तथा टिभी कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
कतिपय मानिसहरुले यसलाई चिनियाँ माइक्रो ब्लगिंग साइट वीबोसंग तुलना गरेका छन् किनभने वीबो पनि सरकार र सरकारको समर्थकहरु माझ निकै लोकप्रिय छ ।
अहिले ट्वीटर जस्तै विशेषता भएका एपहरु प्रसस्त छन् ।
कू र पार्लर जस्तै मस्टोडन र टुटर पनि विकसित भएका छन् तर प्रयोकर्ता भने ट्वीटर जस्तो छैनन् । सन् २०१९ मा मस्टोडनले भारतको एक प्रख्यात वकिलको अकाउन्ट ब्लक भएपछि निकै लोकप्रिय भएको थियो ।
काठमाडौँ । मेटाभर्स युग सुरु हुँदैछ । भारतमा पनि पहिलो मेटाभर्स विवाह अर्को महिना हुँदैछ, जसमा जोडीले मेटाभर्समा रिसेप्शन गर्ने छन् । ब्लकचेन, एआर र भर्चुअल रियालिटीमा आधारित यो प्रविधि
उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले २०२१ मा करिब ४०० मिलियन डलर बराबरको क्रिप्टो चोरे !
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले गत वर्ष करिब ४०० मिलियन डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरेको बताएका छन् । उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले २०२१ मा लगभग ४०० मिलियन डलर मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी चोरेको बताएका
काठमाडौँ । ट्विटरले इरानका सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह अली खमेनीको ट्विटर अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध एउटा एनिमेटेड भिडियो पोस्ट गरेपछि ट्विटरले खमेनीको अकाउन्ट बन्द गरिदिएइको थियो । सो